Asia Masters ဆိုတာဘာလဲ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » Asia Masters ဆိုတာဘာလဲ။
Asia Masters ဆိုတာဘာလဲ။
Posted by asiamasters on Nov 21, 2010 in How To.. |3comments
Asia Masters ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Asia ဆိုတာက အာရှတိုက်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ တိုက်ဆိုတာကနိုင်ငံအများပါဝင် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကုန်းမြေ ဖြစ် တာနဲ့အညီ အာရှတိုက်ဆိုတာက အနောက်ဖက်ကျဆုံး Turkey မှ သည် အရှေ့ဘက်ဆုံ ဂျပန်အထိ ကျယ်ပြောစွာတည်ရှိပါတယ်။အာရှ တိုက်ဆိုတာက လူသားတွေရဲ့ သမိုင်းမှာအလွန်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကဘာလဲဆိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူသားတွေအများဆုံးကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာရေးတွေဖြစ်တဲ့ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ Buddhism၊ ဂျူးဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ နဲ့မူဆလင် ဘာသာ အားလုံးကိုထူတောင်သူတွေဟာ အာရှတိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ အာရှတိုက်ကလွဲလို့ တခြားတိုက်တွေမှာ ပေါ်တဲ့ကြီးမားတဲ့ ဘာသာရေး ဆိုတာ များစွာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း နှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) လောက်ကတည်းက အလွန်ကြီးမားခဲ့တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေရှင်သန်ခဲ့တဲ့ အာရှတိုက်ကြီးဟာ ၁၉ ရာစုနှစ်မှာ စက်မှုနည်းပညာအလွန်တိုးတက်ဖွဲ့ဖြိုးလာခဲ့တဲ့ ဥရောပနိုင်ငံများရဲ့ ကျွန်ပြုလုယက်၊ ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံအားလုံးလိုလိုဟာ ဥရောပသားတွေရဲ့ စိတ်ကြိုက်အုပ်ချုပ်မှုတွေ အောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အလွန်ကြီးမားကျယ် ပြန့်တဲ့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံကြီးဟာ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ လက်အောက်ကို ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ များဟာလည်း အင်္ဂလိပ် လက် အောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်တို့၊ ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကတော့ ပြင်သစ်တို့ရဲ့ လက်အောက်ကို ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံကြီးကတော့ သိပ်ကြီးလွန်းတော့ တစ်နိုင်ငံတည်းမသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း အမဲကောင်ကြီးကို ခွေးအတွေဝိုင်းဆွဲသလို ဟောင်ကောင်လိုနေရာမျိုးကိုတော့ အင်္ဂလိပ်ကသိမ်းပါတယ်။ မကာအိုလိုနေရာမျိုးကိုတော့ပေါ်တူဂီကသိမ်းပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးသိမ်းပိုက် ချယ်လှယ်ခဲ့ကြတာဟာ နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်နှောင်းပိုင်းအထိနှစ်ပေါင်းရာချီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးတဲ့ နောက်ပိုင်း အခြေ အနေရောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံအတော်များများဟာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲဒီနိုင်ငံတွေဟာ ဒီအတိတ်က ကိုလိုနီဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကအခုထိခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ အခု (၂၁) ရာစုနှစ် အစောပိုင်းကို ၀င်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဌာန်ကအတော်ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ ဂျပန် နိုင်ငံကစတင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့တဲ့ Economy ကြောင့် အာရှဒေသမှာ ကျားနိုင်ငံတွေအဖြစ် အင်အားကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ်လာပါတယ်။ အခု (၁၀) စုနှစ်အတွင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံကြီးနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အလွန်ကြီးမားစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ Economy ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့၊ ပထ၀ီဝင်နိုင်ငံရေးနဲ့Economic အခြေအနေတွေအားလုံး ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အခုတော့ အာရှနိုင်ငံတွေဟာဥရောပနဲ့အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေ ပြုသမျှနုရတော့မယ့် အခြေအနေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကို ဂုဏ်ယူပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာရှတိုက်မှာပါ ၀င်တဲ့အတွက် Asia ဆိုတဲ့ အမည်ကို ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်စာလုံးတစ်လုံးက Masters ဖြစ်ပါတယ်။ Masters မှာ s ပါတဲ့အတွက် အများကိန်းကိုဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး တစ်လုံးမှာကသူ့နေရာနဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ယူရတာရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ယူတာကို Polysemy လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Master
ကိုအများသိတာက ဆရာ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးကျိုးပမ်းမှုကာလမှာတော့ Master ဆိုတာကို သခင်လို့သုံးနှုံးခဲ့ပါတယ။် နောက်တစ်မျိုးကတော့ရေကြောင်းမှာ သင်္ဘောမောင်းသူတွေကိုလည်း Master လို့ခေါ်ပါတယ်။ Asia Masters ရဲ့ Master ကတော့
ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို တဖက်ကမ်းခတ်တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒီတော့ မိမိတို့ရဲ့ အသက်မွေးအလုပ်တွေမှာတစ်ဖက်ကမ်းခပ်ကျွမ်းကျင်လာမဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီး Masters ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Asia Masters ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အလုပ်ရှာဖွေလိုသူများနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်လိုသူတွေကို ပံပိုးကူညီမှုပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းကြတော့ Asia Masters ဟာ Learning Center တစ်ခုဖြစပါတယ်။ Learning Center ဆိုတာက သင်ကြားတဲ့ Instructors (နည်းပြဆရာတွေ) ကလည်းလေ့လာနေတယ်၊ သင်ယူတဲ့ (Learners) တွေကလည်း၊ သင်ယူနေတယ်။ အဖွဲ့အစည်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့
နေရာမှာလည်း အုပ်ချုပ်သူကပေးတဲ့ အမိန့်တွေကို လိုက်လုပ် တာမျိုးမဟုတ်ပဲ၊ အောက်ခြေကရလာတဲ့ information တွေကို အထက်က ဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Flat Organization လို့ခေါ်ပါတယ်။ သင်ကြားပေးတဲ့နေရာမှာ ဆရာကပြောတာကို လိုက်မှတ်ပြီး
အလွတ်ကျက်ဖြေတဲ့ (Passive) မဟုတ်ပဲ၊အချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ (Interactive) သင်တန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Asia Masters မှာအဓိကလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ Hospitality နဲ့ Business ဘာသာရပ်တွေဖြစ်ပါ
တယ်။ Hospitality ဘာသာရပ်မှာတော့ Certificate နှစ်လသင်တန်းများနဲ့၊ တစ်နှစ် Hotel Management Diploma သင်တန်းတွေရှိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလိုသူများအတွက် (၂) လသင်တန်းများ ဖြစ်တဲ့ Waiter & Waitess သင်တန်း၊ စားဖိုမှူးသင်တန်း၊ မုန့်ဖုတ်သင်တန်း၊ ဧည့်ကြိုနဲ့လေယာဉ်မယ်သင်တန်း၊ အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းသင်တန်း၊ ဘားဝန်ထမ်းသင်တန်း၊ အဲယားကွန်းကျွမ်းကျင်သင်တန်း၊ တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းငယ်များလုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်လည်း အခမဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။
Asia Masters မှာ သင်တန်းတစ်ခုတက်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်/တရုတ်ဘာသာစကားသင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုနည်း၊ ကိုယ်ယာကအလှသင်တန်း၊ယူနီဖေါင်း၊ ဟိုတယ်လေ့လာရေးခရီးတွေကို အခမဲ့ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ အတွက် တစ်နေရာတည်းမှာ
လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှု အားလုံးကိုရနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Asia Masters ဟာ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးတော့ အခမဲ့မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခက်အခဲရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းရဲ့
တည်နေရာက အမှတ် ၂၇၇၊ အာရှပလာဇာဟိုတယ် (မြေညီထပ်)ဖြစ်ပါတယ်။သွားလာရေးလဲအဆင်ပြေပါတယ်။ Asia Masters ရဲ့ခံယူချက်တွေ ဖတ်လိုပါက http://www.facebook.com/notes.php?id=1601428513&notes_tab=app_2347471856 မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလိုသူတွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းငယ်များကိုလုပ်လိုသူများ အခမဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းကတော့ ၇၃၀၅၀၆၀၃ ဖြစ်ပါတယ်။
In economics, BRIC (typically rendered as “the BRICs” or “the BRIC countries” or known as the “Big Four”) isagrouping acronym that refers to the countries of Brazil, Russia, India, and China that are deemed to all be atasimilar stage of newly advanced economic development.
အမေရိက ကို ပြန်ခံချဖို့ဖွဲ့ ထားတဲ့ … ဘရစ်ထဲ သုံးနိုင်ငံက အာရှကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ ..
အေရှမာစတာစ် ပြောတဲ့ ဇာတိသွေးတွေ..ပြန်ကြွတက်ရတာပေါ့ဗျာ..။
kai>>>>>>>>> မြှောက်ပေးနေပြန်ပြီနော်…………. မနော မပါဘူး ဟိဟိ
ဆိုင်ကြော်ငြာကို ဒီပေါ်မှာ မတင်သင့်ပါဘူး။
“အမဲကောင်ကြီးကို ခွေးအတွေဝိုင်းဆွဲသလို ဟောင်ကောင်လိုနေရာမျိုးကိုတော့ အင်္ဂလိပ်ကသိမ်းပါတယ်။ မကာအိုလိုနေရာမျိုးကိုတော့ပေါ်တူဂီကသိမ်းပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးသိမ်းပိုက် ချယ်လှယ်ခဲ့ကြတာဟာ နှစ်ဆယ်ရာစုနှစ်နှောင်းပိုင်းအထိနှစ်ပေါင်းရာချီကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။”
မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲ အကွက်ကောင်းနေရာရှိတာချင်းအတူတူ တောက်လျှောက် ဆက်လက် ဦးမော့နေနိုင်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ…